I-Shock Absorber, izothuso, iStruts, i-Off-Road Shocks, izothuso eziLungisayo- LEACREE
I-Leacree ivelisa uluhlu olubanzi lwezinto ezithatha ukothuka, ii-struts kunye neendawo ezixhonywe endaweni yezithuthi ezingezantsi.
4*4 Izithuthi ezihamba endleleni
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye umyalezo kuthi.Siza kuqhagamshelana ASAP.
I-LEACREE indibano epheleleyo ye-strut yenzelwe ukubuyisela ukukhwela kwesithuthi sokuqala, ukuphatha kunye nokulawula amandla, kubandakanya yonke into oyifunayo yokutshintshwa kwe-strut.
I-LEACREE igxininise kwizithuthi ezigqibezela iindibano ze-strut, i-absorbers ezothusayo, imithombo ye-coil, kunye neemveliso zokumiswa komoya kwiimoto ezithandwayo zabakhweli ezigubungela iimoto zaseAsia, iimoto zaseMelika kunye neemoto zaseYurophu.
Front Air Ukumiswa Spring Shock Absorber Kuba AUDI A8 Q7
GQIBELA INDIBANO YE-STRUT
IKHITHI YOKUNQUNYISWA UBUDLU
I-AIR TO STRUT Conversion KIT
I-COIL SPRING Conversion KIT
“Ngenkxaso yakho, nakunyaka wobhubhane, sinokujonga emva kunyaka weshishini oyimpumelelo.Sikunye sifezekise izinto ezinkulu, kwaye singathanda ukwenza umbulelo wethu okhethekileyo ngaloo nto”
Ukunqunyanyiswa kuvakala kumnandi kwaye kufanelekile. ”
YINTONI EYENZA I-LEACREE IBALULEKILE KWI-AFTERMARKETHI?
Isimo sengqondo "sokukhokela kunye nokusungula izinto ezintsha" senza i-LEACREE ihlale ikwinqanaba eliphezulu kwitekhnoloji yokunqunyanyiswa.Ukuzisa amava okuqhuba awona aphezulu abanini-moto, izothuso ze-LEACREE kunye ne-struts ziphuculwa ngenkqubo yevalvu ephuculweyo.
Ikhithi yokunqunyanyiswa kwe-aftermarket yenye yezinto zethu ezikhethekileyo.Siphuhlise ukunqunyanyiswa kwezemidlalo kunye neendawo zokunqunyanyiswa ngaphandle kwendlela.Nokuba ujonge ukuthoba okanye ukuphakamisa imoto yakho okanye iSUV, sinokuhlangabezana neemfuno zakho.
Ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zokunqunyanyiswa zinokhuseleko oluphezulu, induduzo kunye nokulungelelaniswa ngokugqibeleleyo kwisithuthi, iimveliso zethu ezintsha kufuneka zilayishwe kwiimoto ukuya kuvavanyo lwendlela.Kuphela emva kokuphumelela iimvavanyo, iindawo zethu zokunqunyanyiswa zivunyelwe ukuthengisa kwi-aftermarket.
Ukuqhuba kwimozulu enekhephu kunokuba ngumngeni.U-LEACREE ucebisa iingcebiso zokukunceda wenze ubusika bube ngamava akhuselekileyo.1. Hlola isiThuthi sakho Jonga uxinzelelo lwetayara, i-oyile ye-injini kunye ne-antifreeze le...
Ndazi njani ukuba imoto yam inomoya wokunqunyanyiswa?Jonga i-asi engaphambili yesithuthi sakho.Ukuba ubona isinyi esimnyama, ke imoto yakho ifakwe ukumiswa komoya.Oku kunqunyanyiswa kwe-airmatic kufaka iingxowa ezenziwe ...
Eyona nto ixhaphakileyo yokungaphumeleli kokumiswa komoya kukwispring bag yomoya.I-LEACREE coil conversion kit iya kuphelisa iingxaki.Siza kukwazisa iimpawu zemveliso kunye neenzuzo kuwe.I-LEACRE...
Kutheni le nto iindibano ezigcweleyo ze-strut ziye zaziwa ngamagcisa aqeqeshiweyo?Ngenxa yokuba ziyakhawuleza kwaye kulula ukuzifaka.Ngokukhawuleza ivenkile yokulungisa inokuguqula umsebenzi wokutshintsha i-strut, kokukhona ibhilikhwe...
Ukuba unomdla wokunqunyanyiswa kwethu komoya kwikhithi yesigqubuthelo se-coil spring, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi: I-imeyile: info@leacree.com/ lily@leacree.com (USA) Umnxeba: +86-28-6598-8164 / 865-253-7225 (...
IShock Absorber yeMoto China Shock Absorbers Ukothuka okunokulungiswa Air Suspension Strut Gqibezela iiStruts Gqibezela iNdibano yeStrut